Mareykanka oo cunaqabateyn saaray maal-geliyayaasha Xizbullah ee Lubnaan
Tani waa faallo ka tarjameysa aragtida Dawladda Mareykanka.
18-kii January, Mareykanka ayaa cunaqabateyn saaray saddex shirkadood oo dhaqaalaha fududeeya oo xiriir la leh ururka Xisbullah, sidoo kale waxaa xayiraaddu ay ku dhacday shirkad ay leeyihiin oo saldhigeedu tahay Lubnan.
“Waxaan tallaabadani u qaadeynaa innaga oo garab-istaagis u muujineyna shacabka Lubnan, kuwaas oo ammaankooda iyo madaxbannaanidooda ay wali halis ku yihiin dhaq-dhaqaaqyada isugu jira musuqmaasuqa iyo qarbudaadda ee Xisbullah,” Sidaa waxaa yiri Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken.
Saddex shakhsi ee la calaamadeeyay ayaa kal ah Adel Diab, Ali Mohamad Daoun, iyo Jihad Salem Alame, waxaa kaloo cunaqabateyntu ku dhaceysaa xarunta ay aas-aaseen ee ganacsi ee lagu magacaabo Dar Al Salam ee qaabilsan Dalxiisa iyo Socdaalka. Cunaqabateyntooda ayaa kusoo baxday wareegtada tirsigeedu ahaa 13224, taas oo lagu bartilmaameedsado hogaamiyaasha argagixisada, iyo saraakiisha ururada argagixisada iyo sidoo kale kuwa taageerada u fidiya argagixisada ama sameeya ficillada argagixisada.
21-ki January, Mareykanka ayaa ayaa isna liiska cunaqabateynta ku daray Adnan Ayad oo loo heysto inuu ka tirsanyahay hey’adaha dhanka dhaqaalaha fududeeya ee xiriirka la leh Xisbullah, ninkaan ayaa sidoo kale xubin ka ah shabakad caalami ah oo ay ku jiraan shirkadaha wax fududeeya, kuwaas oo isaga iyo Adel Diab ay ku xirnaayeen. Diab ayaa shirko kula ah Ayad xarun ganacsi, waxayna labaduba qeyb ka yihiin fududeeyayaasha dhaqaalaha ee Xisbullah.
Mareykanka ayaa u aqoonsaday Xisbullah urur argagixiso ajnabi ah 8-di October sannadki 1997, sidoo kale waxaa si gaar ah loogu aqoonsaday Urur Argagixiso Caalami ah 32-ki October sannadki 2001. Hezbollah ayaa mas’uul ka aheyd qaar ka mid ah weeraro argagixiso oo caan ka noqday dunida.
Waxaa ka mid ah weerarki argagixiso ee sannadki 1983-ki lagu qaaday saldhigi ay ciidanka badda Mareykanka ku lahaayeen Beirut, kaas oo lagu dilay 241 askari oo Mareykan ahaa. Weerarki sannadki 1994-ki lagu qaaday Xarunya Jaaliyadda Yahuudda AMIA ee magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina, halkaas oo lagu dilay 85 isla markaana lagu dhaawacay boqollaal kale, iyo sidoo kale shirqoolki lagu dilay ra’isulwasaarihi hore ee Lebanon Rafic Hariri sannadki 2005, kaas oo sidoo kale ay ku dhinteen 22 qof kuna dhaawacmeen 226.
Bayaan kasoo baxay Waaxda Maaliyadda Mareykanka 18-ki Jannaayo ayaa lagu sheegay in, “Magacaabista ayaa muujineysa dadaallada socda ee ay Maaliyaddu ku beegsaneyso isku dayga sii socda ee Xisbullah ee ay ku dooneyso in ay uga faa’ideysato waaxyaha maaliyadda adduunka isla markaana ka baxsato xayiraadaha.”
Lubnaan ayaa beri ahaa dal sii horumarayo, haddase waxaa la dagay qalalaase dhaqaale oo daran. Saddex meelood meel shacabka Lubnan ayaa la nool faqri.
Ku-xigeenka Xoghayaha Khasnadda Argagaxisada iyo Sirdoonka Maaliyadda Brian Nelson ayaa qoraal ku sheegay, “Hezbollah waxay ku andacoonaysaa inay taageerto dadka Lubnaan, laakiin si la mid ah jilayaasha kale ee musuqmaasuqa ee Lubnaan ee ay Wasaaraddu aqoonsatay, Xisbullah waxay sii waddaa inay ka faa'iidaysato ganacsiyada qarsoon iyo heshiisyo siyaasadeed oo dibadda ah, hantida ay urursatay ayaa ah mid aysan waligood arkin shacabka Lubnan. "
Xoghaye Blinken ayaa isna yiri, “Hezbollah iyo saaxibadood waxay aad uga walwalsanyihiin horumarinta danahooda gaarka ah iyo batroonigooda Iran, inti ay ka fakari lahaayeen danaha shacabka Lubnan.”
Mareykanka wuxuu sii wadi doonaa inuu tallaabo u qaado sidii uu u arbushi lahaa dhaqdhaqaaqyada xasillooni darrida iyo khatarta Xisbullah.